Abenzi be-GFS Tank & abahlinzeki - China GFS Tank Factory
Ithangi Likamasipala Lokuhlanza Indle
Ithangi le-GFS, okulula ukuyifaka, lingahlanganisa ngandlela-thile izindawo ezahlukahlukene zokuphathwa kwendle, ukufeza umphumela wokwelashwa kwendle osebenza kahle, nesixhumanisi sokwelashwa kufanelekile.
Kusetshenziswa ezitshalweni ezinkulu zokukhiqiza ama-biogas ezidinga ukuphathwa ezifundeni ezahlukahlukene noma ngokwehlukana, futhi inamandla amakhulu okwelapha imfucuza eyodwa futhi ikhethekile kakhulu.
Isicelo sokugcina amanzi ngomlilo, ukwakhiwa kwebhizinisi lomlilo, ngokuya ngezidingo zendawo kanye nemininingwane okumele uyikhethe.
I-Aeration tank, yokwelashwa kwendle, ingesinye sezixhumanisi ezibalulekile.
I-Clarifier tank, yokwelashwa kwamanzi angcolile, izidingo ezithile zosayizi ngokusho kokukhethwa kwamakhasimende.
Ithangi le-GFS, lingahlukaniswa ngezindawo zokuphathwa kwendle, kube lula futhi kuguquguquke, umklamo ovumelana nezimo.
Amathangi wokugcina amakhemikhali
Ithangi le-GFS linokumelana nokugqwala okuhle kakhulu futhi lisetshenziswa kakhulu ukugcina i-acid ne-alkali liquid ezitshalweni zezimboni. I-koqweqwe lwawo lufuthwe ebusweni bepuleti lensimbi, bese kwenziwa ukucwiliswa okuphezulu ukwenza ubuso bensimbi buqine ukugqwala. Indawo yoqweqwe lubushelelezi, icwebezelisiwe futhi yafakwa uphawu nge-sealant ekhethekile, elungele izinhloso eziningi zokugcina uketshezi.
ithangi elihlinzekwa yizimboni
Kulula ukufaka, ukuphatha nokuhlangabezana nezidingo ezahlukahlukene zekhwalithi yamanzi.
Amathangi e-GFS asetshenziswa kakhulu ekulondolozeni amanzi ezimbonini. Ingathwala amanzi amaningi akhethekile noma uketshezi, njenge-brine, amanzi ahlanziwe, amanzi akhethiwe, amanzi anosawoti, amanzi athambile, amanzi e-RO, amanzi ahlanzekile namanzi amsulwa e-ultra.
Ithangi Elinikezwa Amanzi Okuphuza
Ngokuhambisana ngokuqinile nokuqukethwe yizindinganiso zomhlaba jikelele zokuphepha kokudla ezigoqwe amapuleti ensimbi, izitifiketi ezithile ezitholakele kanye namalungelo obunikazi kungabukwa ekhasini elifanele.
Khweza ithangi lokugcina amanzi
Amathangi e-GFS ahlinzeka ngokugcinwa kwamanzi / uketshezi okuhle kakhulu ezindaweni ezithile ezikhethekile (izindawo zezintaba, iziqhingi, izindawo eziwugwadule).
Kungenziwa ngezifiso ngokuya ngezidingo zamakhasimende, ubukhulu bamathangi, umbala, ibanga lokuzamazama komhlaba, njll.